1.အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကုန်ကြမ်းများကုသမှုစနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် ,extrusion စနစ်က, ခြောက်သွေ့တဲ့စနစ်, အရသာစနစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်.
2.အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်, whice သည်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအမျိုးမျိုးသောနည်းများဖြင့် extrudate တိုးချဲ့မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်.
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကုန်ကြမ်းများကုသမှုစနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် ,extrusion စနစ်က, ခြောက်သွေ့တဲ့စနစ်, အရသာစနစ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်, whice သည်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုအမျိုးမျိုးသောနည်းများဖြင့် extrudate တိုးချဲ့မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်. စက်အားလုံးကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်, ခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဒီဇိုင်းနှင့်မြင့်မားသောအလိုအလျောက်နှင့်အတူရှိ၏; အဆိုပါ screw နှစ်ခုအလွိုင်းသံမဏိဖြင့်လုပ်နေကြသည်, အဆောက်အ ဦး ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစနစ်ကဖွဲ့စည်းပုံနှင့် Self- သန့်ရှင်းရေး function ကိုအတူ.
* ပိုကောင်းအောင် granule အရည်အသွေးသေချာစေရန်လုပ်ငန်းစဉ် parameters တွေကိုနှင့်အလိုအလျောက်၏တိကျသောထိန်းချုပ်မှု: gelatinization, ချဲ့ထွင်, texture နှင့်တသမတ်တည်းအရည်အသွေးကို. အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးစံနှုန်းများကိုရရှိနိုင်သည်. အဆိုပါ viscous ငါးပိ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အဆိုပါ screw နှစ်ခုနှင့်စည်အကြားပွတ်တိုက်ပေါ်တွင်မူတည်ပါဘူး. ခွေးအစာတောင့်မျဉ်းကြောင်း၏အလိုအလျောက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ညှိနှိုင်းမှုစနစ်များ, အဆိုပါ modular ဝက်အူ configurations နှင့်ဝက်အူအမြန်နှုန်းကိုအလွယ်တကူပရိုဂရမ်များနှင့်ခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရဲ့မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်သည်.
* အသိဉာဏ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း : စာရွက်စီမံခန့်ခွဲမှု (မှတ်တမ်းတင်, အသုံးပြုခွင့်, ကြီးကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း), လုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှု (start / stop), တပ်ဆင်ထားသောအာရုံခံကိရိယာ, ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု. အဆင့်မြင့်လိုင်းအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျော့နည်းစေပြီးပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုကိုလွယ်ကူစေသည်.
* တီထွင်ဆန်းသစ်သောပုံသဏ္andာန်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော - အရောင်အသွေးစုံသောထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးရန်တီထွင်ဖန်တီးမှုပုံစံများနှင့်အထူးသေတ္တာများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံးသည် (ပူးတွဲထုတ်ယူ) ,လိုအပ်သည့်အခါမြင့်မားသောအဆီပါဝင်သောကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပါဝင်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်.
* ခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလျှော့ချ, extrusion နှင့်ခြောက်သွေ့ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်စံအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုခြင်း, ကွဲပြားခြားနားသောစက်အစိတ်အပိုင်းများကိုလွယ်ကူစွာဝင်ရောက်ခွင့်.
* ခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏စွမ်းရည်: 100 ကီလိုဂရမ် / ဇ 1,000 ကီလိုဂရမ် / နာရီ
ခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏ Flow ဇယား :
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းစနစ်ပြင်ဆင်ခြင်း→အရောအနှောစနစ်→ Extruding စနစ်→ခြောက်သွေ့စနစ်→အမွှေးနံ့သာစနစ်→အအေးခံခြင်း→ထုပ်ပိုးခြင်းစနစ်
အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ,ကျနော်တို့ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်နှင့်အညီခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်
1.) မတိုင်မီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဝန်ဆောင်မှု, စဉ်အတွင်း,နှင့်ရောင်းအားပြီးနောက်;
3.) အရာအားလုံးကိုအလုပ်လုပ်သည်အထိပစ္စည်းကိရိယာများ debugging;
5.) ပစ္စည်းကိရိယာများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသင်တန်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ operating;
7.) ပေး 1 တစ်နှစ်ပြည့်အာမခံချက်နှင့်သက်တမ်းထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှု.